Ady amin’ny hosoka… : hampiasa « hologramme » amin’ireo taratasy ny CUA | NewsMada
Ady amin’ny hosoka… : hampiasa « hologramme » amin’ireo taratasy ny CUA
Miala any indray ny tetikasa hanatsarana ny fomba fitantanana sy ny fomba fiasa eo anivon’ny tanànan’Antananarivo (CUA). « Hatao mangarahara ny fanomezana taratasy fahazoan-dalana amin’ny resaka fanorenana na ny “permis de construire”. Eo ihany koa ny “licence de capacité” ho an’ny fiara mpitatitra rehetra, toy ny taxi sy ny fiarabe mpitatitra, ny “vignette” amin’ny “contre visite” ary ny tapakila ho an’ny mpivarotra (carte de marchand). Tsapa fa nisy tandrevaka ny fomba fitantanana ireo rehetra voatanisa ireo, ka ezahina harenina izany satria mampidi-bola hoan’ny kaominina », hoy ny lefitry ny ben’ny Tanàna, Andriamorasata Julien, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely.
Teknolojia avo lenta hisorohana ny hosoka
Nosoniavin’ny ben’ny Tanàna sy ny avy amin’ny orinasa Ametis tamin’izany ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta, tafiditra amin’ny 3P, amin’ny fampiasana teknolojia avo lenta, “hologramme” misoroka tanteraka ny hosoka, amin’ireo taratasy voalaza eo ambony eo ireo. “Ahafahana miady amin’ny fanorenana tsy ara-dalàna, ny mpivarotra amoron-dalana ary ny gaboraraka rehetra mitranga eo amin’ireo fiara mpitatitra izany. Efa zatra miaraka amin’ny kaominina any ivelany koa ny orinasa Ametis ka azo antoka ny maha matihanina azy ireo eo amin’ity sehatra ity”, hoy ihany izy.
Nanambara kosa ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao fa miezaka manome sy mametraka zava-baovao hatrany amin’ny fanarenana ny Renivohitra ny mpitantana. “Enga anie ka hitondra fanavaozana ho an’ny firenentsika, indrindra fa ho an’ny tanànan’Antananarivo io tetikasa io”, hoy izy.